Tallaabadii ugu dambeysay ee Apple waxay umuuqataa inay xaqiijineyso kormeerka gulukooska ee Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Tallaabadii ugu dambeysay ee Apple waxay umuuqataa inay xaqiijineyso kormeerka gulukooska ee Apple Watch
Waxaan ku sugnaa muddo dheer wararka xanta ah ee ku saabsan shaqeynta cusub ee soo socota Apple Watch ay ku dari karto. Waxaan ka hadlaynaa kormeerka gulukooska. Macluumaadka kor ku xusan Waxay umuuqatay mid cad in wararka xanta ah ay yihiin kuwa culus. Ma aha oo kaliya howlaha shirkadaha saddexaad, haddii aysan ahayn howl-wadeennada Apple. Runtii talaabadii ugu dambeysay ee aad qaaday waxay umuuqataa inay xaqiijineyso inaan mitirkaas cusub ku heleyno saacadda.
Waxaan marar badan ka hadalnay awoodda Apple Watch ay ugu adeegto xirfadle gaar ah. Marka laga reebo in aysan awood u lahayn bogsashada, waxay qabataa waxyaabo badan oo faa iido u leh caafimaadkeena. Waxay naga horjoogsaneysaa dhibaatooyinka wadnaha, waxay naga caawisaa haddii dhicitaan dhaco, waxaan ilaalinaa nadaafadda gacmaha oo wanaagsan ... iwm. Waxa xiga ee Apple rabto ayaa ah inay naga caawiso inaan xakameyno heerarka gulukoosta oo aad moodo inay aad u daran yihiin.
Sababta kaliya maahan wararkaas durba waa soo if baxeen ku saabsan tiknoolajiyaddan cusub, haddii kale maxaa yeelay waa inaan tixgelin siino hadda Apple ayaa bilaabay sahan dadka isticmaala Apple Watch oo waydiisay inay adeegsadaan barnaamij kasta si ay ula socdaan dhaqankooda cunida, daawooyinka, iyo heerarka gulukoosta dhiigga.
Shaashadda shaashadda waxaa lala wadaagay 9to5Mac waxaa aqriyay aqriste reer Brazil ah, oo ku helay emaylkiisa. Sahanku wuxuu leeyahay qayb loogu talagalay astaamaha caafimaadka, kuwaas oo noqday barta ugu weyn ee wax lagu iibiyo ee Apple Watch tan iyo markii la soo saaray.
Ka dib su'aalahan, Apple sidoo kale wuxuu weydiiyaa su'aalo ku saabsan codsiyada dhinac saddexaad si loo maareeyo xogta caafimaadka. Sahanku wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro ku saabsan adeegsiga codsiyada-saddexaad ee raadraaca jimicsiga, raadinta caadooyinka cunidda (oo ay ku jiraan fuuq-baxa iyo nafaqada), iyo maareynta daryeelka caafimaad ee kale (sida daawooyinka iyo heerarka kormeerka tamarta). Gulukooska dhiigga).
Waan ognahay in sahanadani ay u adeegeen shirkadda waqtiyadii hore ee go'aan qaadashada. Tusaale ahaan ka saarida xeedho ee iPhone-ka cusub 12 iyo aalado kale. Marka waxaan dhihi karnaa tani waa ilo aad u wanaagsan waana ay tahay ka badan tahay in aan ku hayno mitirkaas gulukooska ah ee Apple Watch 7. Waxa aynaan ogeyn waa haddii ay noqonayso barnaamij softiweer ah ama casriyeyn. Waxaan rajeyneynaa inay noqon doonto tii ugu horreysay sidaa darteed inteena kalena aan sidoo kale uga faa'iideysan karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Tallaabadii ugu dambeysay ee Apple waxay umuuqataa inay xaqiijineyso kormeerka gulukooska ee Apple Watch
Akadamiyadda horumarinta ee Apple si ay u qabsato Dhismaha Qaranka ee ugu horreeya Detroit
The soo socda MacBook Air, in midabyo kala duwan sida iMac cusub